संसारभरीका युवालाई यस्तो अनौठो अफर : ‘मलाई गर्भवती बनाऊ र पाँच सय युरो लैजाऊ’ ! « NagarikTimes
|| December 18, 2018
संसारभरीका युवालाई यस्तो अनौठो अफर : ‘मलाई गर्भवती बनाऊ र पाँच सय युरो लैजाऊ’ !
३ पुष २०७५, मंगलवार ११:३६
एजेन्सी : अहिले एउटा अनौठो अफरले विश्वबजार तताएको छ । इन्टरनेटमा आफ्नो तस्विर राखी आफूलाई गर्भवती बनाउन संसारभरीका पुरुषलाई चुनौती सहितको अनौठो अफर आएपछि यो चैतमा खरबारीमा लागेको डढेलो जस्तो फैलिएको छ । यो खुलेआम यौन प्रस्ताव राखिएको थियो । यो प्रस्ताव राखेपछि एक जना रोमानियाली महिला अहिले सेलिब्रेटी बनेकी छन् ।
प्रकाशित मिति: ३ पुष २०७५, मंगलवार ११:३६